ipo result(ipo result) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
गुराँस लघुवित्तको आइपीओ रिजल्ट : तपाईको नाम खोज्नुहोस्
काठमाण्डौ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओ २३ हजार ३६३ आवेदकले १० कित्ताको दरले पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलमा भएको बाँडफाँडको क्रममा सेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका २ लाख ७८ हजार ३३ जना आवेदक रित्तो हात भएका छन्। यो कम्पनीले बैशाख १६ गतेदेखि २० गतेसम्म निश्कासन गरेको आइपीओमा मागभन्दा करिब २३ गुणा...
गणपति माइक्रोफाइनान्सको रिजल्ट आयो, तपाईको नाम खोज्नुहोस्
काठमाण्डौ । गणपति माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ ३१ हजार ३०८ जनाले १० कित्ताको दरले पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलले गणपतिको आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । सो क्रममा गोलाप्रथाद्वारा भाग्यमानी ३१ हजार ३०८ आवेदक छानिएका हुन्। आइपीओ खरीदका लागि आवेदन दिएका २ लाख ९१ हजार ३०१ आवेदक रित्तो हात भएका छन् । यो कम्पनीले...
नेपाल एग्रो लघुवित्तको रिजल्ट आयो, तपाईलाई पर्यो ? नाम चेक गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । यसको रिजल्ट समेत प्राप्त भएको छ । सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमीटेडको हात्तीसारस्थित मुख्य कार्यालयमा एक समारोहका बीच आइपीओ बाँडफाँड गरिएको हो । दश कित्ताको दरले कुल १५ हजार १२० आवेदकले सेयर पाएका छन् । यो...
आयो हिमालय उर्जाको आइपीओ रिजल्ट, आफ्नो नाम खोज्नुहोस्
काठमाण्डौ । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । एक समारोहका बीच सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नवील इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । चैत २० गतेदेखि २५ गतेसम्म निश्कासन भएको १४ लाख ८५ हजार कित्ता सेयरको बाँडफाँड गरिएको हो । कुल कित्तामध्ये म्युचुअल फण्डका लागि ७४ हजार २५० कित्ता र...
त्रिशुलीको आइपीओ तपाईलाई कति पर्यो ?(रिजल्टसहित)
काठमाण्डौ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका १९ मध्ये सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी हो त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी । यो आयोजनाले निश्कासन गरेको आइपीओमा पहिलो आवेदकको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवेदन दिएका थिए । निकै रफ्तारमा अगाडि बढाइएको यो आयोजनाको आइपीओ बाँडफाँड समेत आवेदन लिन बन्द भएको २ दिनमै...
स्पर्शको रिजल्ट आयो, आफ्नो नाम खोज्नुहोस्(रिजल्टसहित)
काठमाण्डौ । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । सानिमा क्यापिटलले एक समारोहका बीच आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । आवेदकमध्ये कुल २५ हजार २०० ले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् । स्पर्श लघुवित्तले फागुन १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको थियो । जसमध्ये सर्वसाधारणका लागि २...
हेर्नुहोस् माउण्टेन हाइड्रोको आइपीओ रिजल्ट
काठमाण्डौ । माउण्टेन हाइड्रो नेपाल लिमीटेडको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ । सँगै आइपीओ रिजल्ट समेत प्राप्त भएको छ । निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आइपीओ बाँडफाँड गरेको थियो । सो क्रममा यो कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने सबैले सेयर पाएका छन् । यो कम्पनीले आयोजना प्रभावितले नकिनेको समेत गरी...